पोखरामा गठबन्धनको प्रतिबद्धता : सुशासन पहिलो प्राथमिकता - केन्द्र खबर
पोखरामा गठबन्धनको प्रतिबद्धता : सुशासन पहिलो प्राथमिकता
२०७९ बैशाख २३ ११:५७
आचार्यले महानगरको फ्रण्ट डेस्क बैंकको टेलर जस्तो बनाउने बताए । जसरी अहिले बैंक भित्र पस्ने वित्तिकै कहाँ के हुन्छ र त्यसका लागि के के चाहिन्छ भन्नेदेखि सेवा चुस्त बनाइएको हुन्छ त्यसरी नै महानगरमापनि काम हुने वातावरण निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
‘महानगरको फ्रण्ट डेस्कमा बस्नेले कागजपत्र हेरेर केका लागि केके कागजपत्र चाहिन्छ ? त्यो भए नभएको हेर्छ र छैन भने कुन कागजात नपुगेको हो भन्नेबारेमा उसले जानकारी दिन्छ’–उनले भने । हैन त्यहिं मिल्ने भए डेस्कमा बस्नेले त्यहिंबाट सहजीकरण गरिदिने खालको हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने उनले बताए ।
त्यसपछि कागजात पूरा भएपछि कति समय लाग्छ ? एक घण्टा, ३ घण्टा, १ दिन, ३ दिन कति लाग्ने हो उसले त्यतिबेलै भन्दिनेपनि उनको भनाई छ । अहिले कुनै एउटा व्यक्तिले गाडी किनेको भने उसलाई गाडी सर्भिसिङका लागि त फोन आउँछ, उनले भने,‘नीजि क्षेत्रले त यस्तो गर्न सक्छ भने सेवा दिने महानगरपालिकाले किन सक्दैन । त्यहाँका कर्मचारीले किन सक्दैन । सक्छ, सक्ने बनाईन्छ ।’